चिनियाँ खोपको मूल्य तोकियो, कहिले आउला बजारमा ? « Etajakhabar
चिनियाँ खोपको मूल्य तोकियो, कहिले आउला बजारमा ?
बीबीसी – यो महिनाको सुरुतिर एउटा चिरपरिचित चिनियाँ व्यावसायिक घरानाको प्रमुखले आफ्ना कर्मचारीलाई कोभिड-१९ को खोप नोभेम्बरसम्म बजारमा आइसक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए। स्वास्थ्यसेवामा पनि लगानी भएको उक्त घरानाका प्रमुखले यसलाई आर्थिक सुधारको अवसरका रूपमा हेरेको बताउँदै आफ्नो कम्पनीको व्यापार धेरै हुनसक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। त्यसको केही सातापछि चिनियाँ सरकारले खोपमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दियो।
कोरोनाभाइरस महामारी चीनमा सुरु भएर विश्वभरि फैलिएको हो। अहिले चीनले आफ्नो सबै शक्ति लगाएर कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी खोप विकास गर्ने प्रतिस्पर्धा जित्ने प्रयासमा छ। विकासको क्रममा रहेको एउटा खोपको तस्बिर गत साता सरकारी सञ्चारमाध्यममा छापियो। तस्बिरमा प्रयोगशालामा एउटी महिलाले खुसी हुँदै एउटा सानो बाकस समातेकी छन्। सिनोफार्मले डिसेम्बरसम्ममा खोप बजारमा ल्याउने आशा गरेर यसको मूल्य १४० डलर (झन्डै १५,००० रुपैयाँ) तोकेको छ। खोप निर्माण गर्न चीन दृढ देखिन्छ।
विश्वभरि अन्तिम चरणका परीक्षणमा रहेका छमध्ये आधा खोप चिनियाँ हुन्। विश्वव्यापी परीक्षण खोप विकासको अनिवार्य सर्त हो। तर रमाइलो के छ भने चीन आफ्नै देशमा आवश्यकताअनुसार खोप परीक्षण गर्ने अवस्थामा छैन किनभने कोरोनाभाइरसलाई त्यहाँ सफलतापूर्वक नियन्त्रण गरिएको छ। “सबै खोप निर्माताहरू हजारौँ व्यक्तिमाथि गरिने तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण उच्च भएका स्थान खोजिरहेका छन्,” हङ्‍कङ यूनिभर्सिटी पब्लिक स्कूल अफ हेल्थका प्राध्यापक बेन काउलिङले बताए।
उनी चिनियाँसहित अहिले विकास भइरहेका खोपप्रति सकारात्मक छन्। “मलाई लाग्छ अहिले तेस्रो चरणमा परीक्षण भइरहेका खोपहरू प्रभावकारी हुने धेरै राम्रो सम्भावना छ।” रुस र अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका केही व्यक्तिले चाहे जस्तो चीन पनि एक कदम अगाडि बढेको छ।
चीनका एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले गत साता गएको महिनादेखि चीनका प्रमुख सरकारी कर्मचारीहरू माथि खोपको गोप्य परीक्षण गरिएको बताएका छन्। न्याश्नल हेल्थ कमिशनका जेङ जोङ्वेईले सरकारी टीभीमा आफूहरूले आपत्‍कालीन अधिकार प्रयोग गरेर सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विकासक्रममै रहेका खोप दिएको बताएका छन्।
“डिसेम्बरसम्ममा बजारमा केही खोपहरू आउन सक्छन्। तर आवश्यक पर्ने ठूलो मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मलाई थाहा छैन,” प्राध्यापक काउलिङले भने। उनको विचारका सन् २०२१ को ग्रीष्मतिर सबै नागरिकलाई कोभिड-१९ को खोप दिन सकिन्छ। चीनले अहिले यूएई, पेरु र आर्जेन्टिनामा हजारौँ व्यक्तिमा आधिकारिक रूपमा खोपको परीक्षण गरिरहेको छ। त्यो सरकार र औषधि कारखानाहरू बीचको विश्वव्यापी सहकार्यको अङ्ग रहेको छ।
श्रीमानले बिहे गरेर छाडेपछि,रातको १२ बजे छोरा छाडेर मर्न हिडेकी शर्मिला १ बर्षमै करोडपति,बिगत सम्झेर धुरु धुरु रोइन
१० मंसिर २०७७, बुधबार १६:२३ | कमल सरगम
जमिन मुनिको मानिस पनि पत्ता लगाउन सक्ने प्रहरीको कुकुर लिएर बम्जनको कोठामै पुग्दा जे देखियो (अप्रेसनः भिडियो)
८ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:५७ | Taja Khabar
किन रुप फेरे अभिषेकले ? चिन्नै नसकिने फोटो देखेपछि उनका फ्यान पनि अचम्म
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनले आफ्नो लुक चिन्नै नसकिने बनाएका छन् । आफ्नो आगामी
‘कुली नम्बर १’ मा बरुण धवनको ५ अवतार, दर्शकको अनौठो प्रतिकृया
एनेन्सी । एउटा कलाकारको ५ रुप रहेको फिल्म कुली नम्बर १ अहिले बलिउडमा चर्चा छ
बिहेपछि प्रियंका कार्की र आयुष्मानको झगडा सुरु (पुरा भिडियो)
नेपाली चलचित्रमा सर्बाधिक रुचाइएकि नायिका प्रियंका कार्की र उनको श्रीमान बिहे पछि पहिलोपटक खुलेरै मिडियामा
भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन नेपालीमै फरर बोले, नेपालसंग उनको यस्तो छ पारिवारिक सम्बन्ध (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल नेपाल भ्रमणका लागि विहिवार काठमाडौ आइपुगेका छन् । उनी
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १५:१६
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:३८
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:५७
कोरोनाले यो अवस्थामा ल्याईदियो, जो पहिला पाईलट थिए आज फूड डेलिभर बने
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:२६
Taja Khabar Media